Lego NinjaGo lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Lego NinjaGo lalao
mpankafy an'i atsinanana ady sy mpankafy ny endrika tsy tara ny tonga lafatra hiady vintana eo amin'ny peratra nandritra ny lalao an-tserasera Lego Ninja Go. Mahery fo twirl manodidina sy manodidina ny kianja filalaovana, miezaka ny manosika ny fahavalo any an-dafin'i. Haingana tsara, fanafihana aloha, ary dia ho manana filoha manomboka amin'ny teboka vitsivitsy. Afaka milalao ho maimaim-poana amin'ny Ninja herim-po be izay tsy mitovy ny nentim-paharazana, fa manome fahafahana lehibe. Ny lalao ihany toa mamirapiratra sy tsara tarehy, fa ny fihetsehana dia hitaky ny tahan'ny ny fihetseham-po, na dia avy gamer iray za-draharaha.
Lego Ninjago: Manaova antsantsa
The Trivia Quiz. Ultimate Lego Ninjago
Fiverenan'i NinjaGo Chen
Lalao Lego NinjaGo tamin'ny Category:
Farany Lego NinjaGo lalao
Lalao Online Rehetra Lego NinjaGo lalao
Iza moa ny ninjas?
Lalao sy ninjas – fialam-boly tsara ho an'ny ankizilahy. Tsy noloahany izy ireo, satria izany no tena be herim-po, haingana sy fetsy mpiady izay foana mahita fomba hahatratrarana ny tanjona. Mahazatra antsika ny amin'ny zava-misy fa mijery mampatahotra izy ireo, fa indray mandeha eto amin'ny firenena Legoland, ianao mahita ireo mpiady mahafaty amin'ny endrika hafa tanteraka. Toy ny olona rehetra eto, dia niangona avy misaraka singa Lego ka noho izany dia tena tsara mifanaraka amin'ny toe-javatra, dia tsy toa ireo Ninja mampidi-doza, izay tsy misy afa-mandositra. Fa kely, dia mitana ny anjara dia ho velona ao amin'ny nofinofy rehetra izao, hihazakazaka noho ny majika ny singa, ary nampihatra ny fotoana rehetra ao amin'ny haiady, narabatyvaya traikefa sy mahazo hery sy ny fahaiza-manao fanampiny.
Games Lego Ninja Go – vokatra tena am-boalohany izay tsy mitaky fahaiza-manao manokana amin'ny fitantanana sy hiatrika ny dingana tsy misy olana. Intuitively, dia afaka mora foana maminavina izay tsy maintsy atao, fa matetika no mitovy Nihaona tamin'ny fanaraha-maso ao amin'ny dikan hafa. Noho izany, eo anatrehanao ny safidy ny toetra – Ninja, iza no tianao mitantana. Tsirairay amin'izy ireo dia manana fahaiza-manao sasany, fa na inona na inona no mifidy, satria voalohany izy mbola tena kely saina, ary ny solosaina dia haka anao ho mpanohitra izay mifanandrify ny mpiady. Ninzyago Lego lalao fanokafana, ianao mahita ny tenanao ao amin'ny kianja filalaovana ny ady, izay mpandray anjara mifaninana eo amin'ny heriny. Izy ireo rotate yuloy sy miezaka ny mandondòna ny hafa any an-tsaha. Tsaina angamba ianao fa izany no hevitry ny ady – manosika ny mpanohitra avy amin'ny peratra. Raha vao izany no nitranga, ny boribory sy namporisika faran'ny lalao hevitra isa. Isaky ny toetra amam-panahy mahazo traikefa sy lasa matanjaka kokoa, fa ny fahavalo mahazo fahaiza-manao, ka ny miaramila indray no mitovy. Manaraka dia tsy maintsy miady tsy iray, fa maro Ninja izay complicates ny asa. ,
Lohahevitra Games Lego Ninja Go
Games Lego Ninja Mandehana milalao natolotra isan-karazany ao amin'ny foto-kevitra, noho izany, nahavita ny mahafinaritra, indray mandeha dia afaka manokatra indray sy ny manaraka mandroboka ho any amin'ny tontolon'ny mifono mistery Lego Ninja. &Nbsp;
azon'ny Misafotofoto, crank yuloy mahery fo, mifidy ny tari-dalana, hanome azy ny hafainganam-pandeha sy ny hevitra ao amin'ny lalana marina. Alohan'ny nofefenao ny manda, fa aoriany no zava-dehibe harena miafina – tombontsoa fa afaka hanangona an-tampon'ireo ny ny lalao kaonty. Indraindray ny andinin-tsoratra masina mihidy sakana, fa izy ireo, koa, dia afaka manala ny, dia vao hanao ny sasany hery. &Nbsp;
Indray mandeha koa, Lego Ninja Mandehana lalao tsy maintsy hilalao, nandray ny iharan'izany mpampahory milina izay nanopy ny masony amin'ny ady ny Ninja. Dia namely ny firenena sy miezaka ny handrava azy. -Baiboly anananao miaramila dimy miaramila, izay rehetra Nangonina avy cubes endrika, fa tsy manelingelina azy. Tsirairay dia manana hery manokana, sy ny fanangonana ny hery-dehibe nandritra ny ady, dia afaka mampiasa azy ireo hanatsara ny fampisehoana sy ny fahaiza-manao mba hanome Nahavita nanda mety tsara ho amin'ny fahavalo.
Ho hitanao ny mahavariana dia amin'ny alalan'ny ny mareva-doko tany, fa ny loza tsy mamela ny hanakana sy mankafy ny hatsaran-tarehy. Tsy nampoizina fanafihana fahavalo mitaky ny fahaizana fanodinkodinana, mba Mandositra ny fanafihana iray hafa. Mba hifindra ho any amin'ny dingana manaraka, dia ilaina ny hanadio ny fahavalo avy ny amin'izao fotoana izao, ary ho vonona ny ho any ny oram-panala-Nahatratra ny fara tampony tendrombohitra, midadasika foana sady maizina lakaly. Play Lego Ninja Go lalao – be herim-po io dia amin'ny be herim-po mahery fo, izay tsy matahotra ny demonia sy ny ratsy fanahy, mba hanohitra ny fahavalo ny herim-ary handray anareo ho any amin'ny namany, fa fandresena dia fanapahan-kevitra sy tsy azo ihodivirana. Raha vonona ny hitondra mampidi-doza, mba namely ny lalana fotoana izao.